Mofomamy tsy misy atody turmerika - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
Mofomamy tsy misy atody, turmerika
fitsangatsanganana45 minitraOlona 8
Rehefa manao an'io ianao Biscuit ataovy andrana ny fianakavianao na ny namanao. Anontanio izy ireo raha fantatr'izy ireo ny antony mahatonga an'io loko io ... hijerena raha maminavina izy ireo fa noho ny turmeric.
Ny iray amin'ireo akora ao aminy dia ny ranon'ny voasary makiranaIzany no antony nisafidianako ny tsy hampiasa masirasira simika. Nanampy kely ny bicarbonate izany, miaraka amin'ny asidan'ny citrika io, dia mampisondrotra ny mofomamy ary mijanona toy ny hita amin'ny sary. Mba hitrangan'izany dia tokony hifandray amin'ny farany ny ranom-boasarimakirana sy ny bicarbonate, alohan'ny handrahoana azy. Ny zava-drehetra dia voafaritra ao anaty karatra fahandro.
Fanazavana ... ny tamotamo Zara raha manome tsiro fa mahatonga ny mofomamy hanana loko mahafinaritra.
1 Mofomamy tsy misy atody, turmerika
Mofomamy spaonjy misy yaourt, ronono, voasarimakirana ... ary tsy atody. Mora atao ary miaraka amin'ny loko volomboasary mahafinaritra.
Ny hodiana voasarimakirana 1 voasarimakirana
200 g ny lafarinina
Yaorta voajanahary 1 (eo ho eo amin'ny 125 g)
1/2 sotrokely (kafe) bikarbonate
Manafana ny lafaoro hatramin'ny 180º izahay. Manosotra sy manadio lasitra mofomamy plum kely izahay.
Ataovy ao anaty vera ny lafarinina, turmerika, peon lemon, siramamy ary bikarbonate. Afangaro mandritra ny fotoana rehetra ny zava-drehetra 5 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Izahay dia manampy ny yaourt, ronono ary menaka. Afangaro mandritra ny 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampio ny ranom-boasarimakirana sy programa 5 segondra, hafainganam-pandeha 5.
Raha tsy avela hijanona ny koba, apetrantsika ao anaty lasantsika ary, avy hatrany dia manendasa 180º mandritra ny 40 minitra isika.
Aorian'io fotoana io dia manamarina amin'ny tsorakazo isika raha vita tsara ny atiny. Raha eny dia esorintsika ao anaty lafaoro izany.
Avela hangatsiaka sy hiseho.
Azontsika atao ny manolo ny bicarbonate ho an'ny kaopy 1/2 an'ny masirasira fanaovana karazana mpanjaka.
Fanazavana fanampiny - Mofomamy spaonjy voasarimakirana (tsy atody)
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsy mahazaka atody, Fivarotana mofomamy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Tsy mahazaka atody » Mofomamy tsy misy atody, turmerika
Paty misy legioma sy trondro
Sakafo feno crème an'ny zucchini sy katsaka, akoho misy legioma manitra sy legioma steamed